Snatch(2000) | MM Movie Store
Snatch ဇာတျလမျးအကွောငျးမပွောခငျ ဒီကားရဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈတဲ့Guy Ritchie အကွောငျးကိုပွောရမယျထငျတယျ…ဒီဘိုးတျောကွီးက အောငျမွငျမှုရနိုငျခွနေညျးတဲ့ King Arthur လိုကားမြိုးကိုတောငျရငျထဲစှဲကနျြနအေောငျရိုကျနိုငျတဲ့အပွငျ အခုလညျး လကျရှိ မူလကြောရိုးအတိုငျးရိုကျပမေယျ့အောငျမွငျမှုရနတေဲ့ Aladdin ရုပျရှငျကားတို့ရဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈတယျ….
ပွောရရငျအထကျပါ ၂ကားဟာပရိတျသတျရငျထဲကို ပုံရိပျဟောငျးပေါငျးမြားစှာလှမျးမိုးမှုရှိပမေယျ့ သူကတော့ သဈလှငျသောခမျးနားခွငျးရသတှနေဲ့ဖမျးစားနိုငျခဲ့လရေဲ့…
ဒီ Snatch ကားကလညျ့း စိနျတုံးကွီးတဈတုံးကအခွတေညျပွီး လကျဝှပှေဲ့စီစဉျသူရယျ အူကွောငျကွားဓားပွတဈဖှဲ့ရယျ ဂြူးကြောကျမကျြကုနျသညျရယျ လကျနကျမှောငျခိုသမားရယျ လူမိုကျဂိုဏျးခေါငျးဆောငျရယျတို့ရဲ့ကွားက စိနျတုံးကိုလိုကျရငျး လူ့သဘော လူမနောတှကေို ဟာသတှနှေောရငျးအလှပဆုံးပုံဖျောထားလို့ UK 2001 ရဲ့ ဒါရိုကျတာ Empire Award ဆုကိုရရှိခဲ့တယျ…
Bratt Pitt ကွီးကတော့ အကောငျးဆုံးဇာတျပို့ဆနျကာတငျစာရငျးဝငျခဲ့ပွီးအခွားဆု(၄)ဆုလညျး ရရှိခဲ့တယျ….ကိုငျးခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့….
Snatch ဇာတ်လမ်းအကြောင်းမပြောခင် ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့Guy Ritchie အကြောင်းကိုပြောရမယ်ထင်တယ်…ဒီဘိုးတော်ကြီးက အောင်မြင်မှုရနိုင်ခြေနည်းတဲ့ King Arthur လိုကားမျိုးကိုတောင်ရင်ထဲစွဲကျန်နေအောင်ရိုက်နိုင်တဲ့အပြင် အခုလည်း လက်ရှိ မူလကျောရိုးအတိုင်းရိုက်ပေမယ့်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ Aladdin ရုပ်ရှင်ကားတို့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်….
ပြောရရင်အထက်ပါ ၂ကားဟာပရိတ်သတ်ရင်ထဲကို ပုံရိပ်ဟောင်းပေါင်းများစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိပေမယ့် သူကတော့ သစ်လွင်သောခမ်းနားခြင်းရသတွေနဲ့ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့လေရဲ့…
ဒီ Snatch ကားကလည့်း စိန်တုံးကြီးတစ်တုံးကအခြေတည်ပြီး လက်ဝှေ့ပွဲစီစဉ်သူရယ် အူကြောင်ကြားဓားပြတစ်ဖွဲ့ရယ် ဂျူးကျောက်မျက်ကုန်သည်ရယ် လက်နက်မှောင်ခိုသမားရယ် လူမိုက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရယ်တို့ရဲ့ကြားက စိန်တုံးကိုလိုက်ရင်း လူ့သဘော လူမနောတွေကို ဟာသတွေနှောရင်းအလှပဆုံးပုံဖော်ထားလို့ UK 2001 ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Empire Award ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်…
Bratt Pitt ကြီးကတော့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးအခြားဆု(၄)ဆုလည်း ရရှိခဲ့တယ်….ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့….
Paper Flower (2019)